Suuqgeynta dhageystayaasha iskutallaabta | Martech Zone
Suuqgeynta dhageystayaasha iskutallaabta
Tuesday, April 1, 2014 Isniin, Maarso 31, 2014 Douglas Karr
88% dadka Mareykanku waxay leeyihiin ugu yaraan 2 aaladaha internetka ku xiran iyo 90% dadka Mareykanka ah waxay u isticmaalaan aalado badan si isdaba joog ah maalintii oo dhan. Dhanka suuqleyda, tani waxay siineysaa caqabad iyo fursad labadaba isku dubaridka iyo dheregyada dhexdhexaadinta halka dhagaystayaashu joogaan is iyadoo la hubinayo inay ka faa'iideysanayaan awooda aaladda ay ku wada hadlayaan.
Tani macluumaad ku saabsan Uberflip waxay hoos udaadisaa xaqiiqooyinka - tirada dadku waxay ku xiran tahay aaladaha, intee in le'eg ayey ku bixinayaan iyaga, iyo waxay khubaradu dhahayaan - si aad ula qabsan karto oo aad u ruxin karto istiraatiijiyaddaada moobiilka. Ku quusin oo sii wad inaad u rogto wareegga natiijooyinka muhiimka ah.
Tags: biil dugganiskutallaabtaqalab badanhawl badangoogle +heidi cohenwarbaahinta mobiladaneal mohandaawashada tvuberflip
Qiyaasta Leger: Codka Macaamiisha (VoC) Warbixinta Waxqabadka ah
Mustaqbalka ifaya ee Tafaariiqda